Mahar is the distributor of DVD, online & offline channel, authorized IP agent of Movie production, Mahar TV Channel for TV audiences, Mahar App for mobile audiences, Mahar THmy online Media for online audiences and Mahar & Mahar mobile Facebook Social Media for social network.
ABC Content Solutions သည်ဒီဗီဒီ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းချန်နယ်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏တရားဝင်အိုင်ဒီကိုယ်စားလှယ်၊ တီဗီပရိသတ်များအတွက် Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar အက်ပလီကေးရှင်း၊ အွန်လိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar THmy Online Media နှင့် Mahar & Mahar မိုဘိုင်း Facebook လူမှုမီဒီယာ လူမှုကွန်ယက်။
ABC Content Solutions သည္ဒီဗီဒီ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ေအာ့ဖ္လိုင္းခ်န္နယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး၏တရားဝင္အိုင္ဒီကိုယ္စားလွယ္၊ တီဗီပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar အက္ပလီေကးရွင္း၊ အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar THmy Online Media ႏွင့္ Mahar & Mahar မိုဘိုင္း Facebook လူမႈမီဒီယာ လူမႈကြန္ယက္။
We investedalot in movie contents and launched biggest movie library is available only in Mahar. Mahar targets to diverse user groups. From our experience on THmy channel, Myanmar hasahuge movie fan locally. Mahar had previous launched an App in Play Store for over4years. And launchedanew version recently for Myanmar market. We expected to maintain 5,000 over movie library for our users.
Thant Sin Aung4 วันที่ผ่านมา
Myat Thu4 วันที่ผ่านมา
Tubtim Thachang5 วันที่ผ่านมา
Aye Sunma5 วันที่ผ่านมา
Myowin Myanmar5 วันที่ผ่านมา
Nay Htet Linn5 วันที่ผ่านมา
Nay Htet Linn
Shaine Hruska5 วันที่ผ่านมา
Johny Kerner5 วันที่ผ่านมา
မြန်မာဇာတ်ကား၊ ရှော့ရှိတဲ့အချစ်များ(ဟာသရုပ်ရှင်) ခန့်စည်သူ - ပြေတီဦး - အိန္ဒြာကျော်ဇင် - မိုးဟေကို ၊
မြန်မာဇာတ်ကား - ပြန်ပေါင်းတီးအိမ် - နေအောင် ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ မေကဗျာ - Myanmar Movies ၊ Drama ၊ Love
မြန်မာဇာတ်ကား၊ သံယောဇဉ်နဲ့အချစ်၂၀၂၈(ဟာသကား-စ/ဆုံး) - Myanmar Movie- သံေယာဇဥ္နဲ႔အခ်စ္၂၀၂၈
หนังสั้น ป้าบ้านนอก จะซื้อโน๊ตบุ๊ค100เครื่อง! | Lovely Family TV